Bmw gam akporo Car Dvd, Bmw E39 Android Car Dvd, Bmw 5.1 Android Car Dvd na-eduga onye na-eweta ya na China
Nkọwa:Bmw Android Car Dvd,Bmw E39 Android Car Dvd,Bmw 5.1 Android Car Dvd,Bmw 4.2 Android Car Dvd,,
Home > Ngwaahịa > Bmw Android Car Dvd Player
Ngwaahịa nke Bmw Android Car Dvd Player , anyị bụ ndị na-emepụta ọkachamara si China, Bmw Android Car Dvd , Bmw E39 Android Car Dvd suppliers / factory, wholesale high-quality products of Bmw 5.1 Android Car Dvd R & D and manufacturing, anyị nwere ọrụ zuru ezu mgbe-ahịa na nkwado teknụzụ. Le anya n'ihu na nkwado gị!
Ejiji ejiji otu din car multimedia system E90  Kpọtụrụ ugbu a
Anụ ụda kacha mma nke ụgbọ ala kacha elu maka E46  Kpọtụrụ ugbu a
E46 Full Touch android 9.0 audio audio  Kpọtụrụ ugbu a
E39 onye egwuregwu stereo dvd Ego zuru ezu  Kpọtụrụ ugbu a
E39 ụgbọ ala mgbasa ozi sistemụ android 9.0  Kpọtụrụ ugbu a
E46 one din car audio  Kpọtụrụ ugbu a
Fiat Fiorino Citroen Nemo ụgbọ ala isi  Kpọtụrụ ugbu a
oem car multimedia player maka E53 X5 1999-2005  Kpọtụrụ ugbu a
9gbọ ala multimedia Android 9 maka E46 M3 1998-2005  Kpọtụrụ ugbu a
ụgbọ egwuregwu stereo dvd ụgbọ ala maka E39 M5  Kpọtụrụ ugbu a
Single din car ntụrụndụ maka E90 / E91  Kpọtụrụ ugbu a
redio ụgbọ ala maka E46  Kpọtụrụ ugbu a
ụgbọ ala 2 din maka E90 E91 E92  Kpọtụrụ ugbu a
ụgbọ ala mgbasa ozi maka E90 E91 E92  Kpọtụrụ ugbu a
oem android ụgbọ ala ụgbọ ala maka E46 M3 1998-2004  Kpọtụrụ ugbu a
ụgbọ ala mgbasa ozi maka E39 E53 X5 1995-2002  Kpọtụrụ ugbu a
Ihe ntụrụndụ ụgbọ ala gam akporo maka E46  Kpọtụrụ ugbu a
Android ụgbọ ala DVD dvd maka M5  Kpọtụrụ ugbu a
Egwuregwu Multimedia Player nke E46 1998-2005  Kpọtụrụ ugbu a
E39 1995-2003 moto auto multimedia dvd player  Kpọtụrụ ugbu a
Octa Core 2GB Ram 16GB ROM E39  Kpọtụrụ ugbu a
Ejiji ejiji otu din car multimedia system E90
Ejiji ejiji otu din car multimedia system E90 1. Iji Ntanetị Internetntanetị Ebe Niile Nweta Dị Mfe Iji smartphone gị mepụta hotspot WiFi, ma ọ bụ ịzụta 4G LTE dongle. Ọtụtụ ụzọ maka ịbanye na ịntanetị. Can nwere ike ilele ihe nkiri dị na ntanetị,...
Anụ ụda kacha mma nke ụgbọ ala kacha elu maka E46
Anụ ụda kacha mma nke ụgbọ ala kacha elu maka E46 1.Perfect Fit maka ụgbọ ala gị Ezubere ngalaba a iji kwado ma jiri ụgbọ ala gị rụọ ọrụ nke ọma. Emere ihe ọ bụla site na imewe na anya ya ka ọ dị mma kacha mma. Ezie na ngwaike na-eme ka otu a jikọọ...
E46 Full Touch android 9.0 audio audio 1. E46 Full Touch android 9.0 car audio gụnyere android na wince Car DVD Player, nwere ahụmịhe afọ 7 na imebe, n'ichepụta na ire Car DVD player, anyị emeela mmekọrịta azụmahịa na ọtụtụ ndị ahịa bara uru si...
E39 onye egwuregwu stereo dvd Ego zuru ezu
E39 onye egwuregwu stereo dvd Ego zuru ezu 1. Ihe atụ nke E39 ihe eji egwu ụgbọ ala stereo dvd kwụsiri ike ugbu a. Anyị na-anabata ọrụ OEM. Nwere ike iji atụmatụ nke gị maka akara, nkwakọ ngwaahịa na UI. Ike nrụpụta anyị maka igwe eletriki dvd a E39...
E39 ụgbọ ala mgbasa ozi sistemụ android 9.0
E39 ụgbọ ala mgbasa ozi sistemụ android 9.0 1. Mkpebi ihuenyo bụ HD 1024 * 600, sistemụ ụgbọ ala E39 a gam akporo 9.0 bụ ngwaahịa ire ere na-ere nke ọma n'ụwa niile. Nkọwa nke sistemụ sọftịnụ E39 ụgbọ ala gam akporo 9.0 : Ihuenyo HD: 1024 * 600...
E46 one din car audio 1. ezigbo mma E46 one din car audio onye na-ebubata ihe na China. android 9.0 system car dvd player E46 One din car audio, radio IC: 7706 ugbu a na 6686 nabata. Ọrụ dị mkpa nke android ụgbọ ala DVD maka E46 Otu din ụgbọala...
Fiat Fiorino Citroen Nemo ụgbọ ala isi
Fiat Fiorino Citroen Nemo ụgbọ ala isi Otu a Fiat Fiorino ụgbọ ala isi nwere sistemụ arụmọrụ Android 9.0 kachasị ọhụrụ, 4 + 32G ebe nchekwa, Octa-core CPU, RDS redio nwere ahaziri elu. 4 * 50w akwa ike amplifiers na muti-idozi nke EQ maka ọ audioụ...
oem car multimedia player maka E53 X5 1999-2005
oem car multimedia player maka E53 X5 1999-2005 Otu a ihe eji egwu igwe ihe omuma nke ugbo ala nke E53 nwere sistemu sistemu gam akporo 9.0, ebe nchekwa 4 + 32G, Octa-core CPU, RDS di elu. 4 * 50w akwa ike amplifiers na muti-idozi nke EQ maka ọ...
9gbọ ala multimedia Android 9 maka E46 M3 1998-2005
9gbọ ala multimedia Android 9 maka E46 M3 1998-2005 Lee ịkwado ụgbọ ala multimedia Android 9 maka E46, ọ bụ ihe a ma ama n'etiti ndị ahịa anyị, yana sistemụ Android 9 ọhụụ. Ndakọrịta Fit 100% na ugbo ala ndị a: E46 (1998-2005) M3 (1998-2005)...
ụgbọ egwuregwu stereo dvd ụgbọ ala maka E39 M5
ụgbọ egwuregwu stereo dvd ụgbọ ala maka E39 M5 Dị ka otu n'ime ndị na-eweta Android Car DVD emeputa na China, Klyde nwere ezigbo aha n'ọtụtụ mba, dị ka Russia, Turkey, GCC mba wdg. Ebe anyị na-akwado ahịa anyị na-ekpo ọkụ Car Stereo Dvd...
Single din car ntụrụndụ maka E90 / E91
Android 8.0 ụgbọ ala dvd maka BMW E90 / E91 1.Akwadoro ya na njikwa wiilị: wụpụ abụ nke na-esote, dozie olu ma ọ bụ gbanye ọwa ọzọ, na-enweghị iwepụ aka gị na steering whell, na-eme ka njem gị bụrụ nke nchekwa ma nwee ọhụụ karịa DVD inch inch nke...
redio ụgbọ ala maka E46
Android 8.0 ụgbọ ala DVD dvd maka BMW E46 1.Akwadoro ya na njikwa wiilị: wụpụ abụ nke na-esote, dozie olu ma ọ bụ gbanye ọwa ọzọ, na-enweghị iwepụ aka gị na steering whell, na-eme ka njem gị bụrụ nke nchekwa ma nwee ọhụụ karịa DVD inch inch nke BMW...
ụgbọ ala 2 din maka E90 E91 E92
Android 8.0 PX5 car audio 2 din maka E90 E91 E92 1. Nwee ahụmịhe DVD zuru oke site na nkasi obi nke ụgbọ ala nke gị. 2. Nkọwa dị elu na-enye mkpebi dị mma, na-ebuli ahụmịhe ụgbọ ala gị n'ime. 3. Igwe redio na-arụ ọrụ na RDS nyeere ya na-enye gị...
ụgbọ ala mgbasa ozi maka E90 E91 E92
Android 8.0 PX5 ụgbọ ala mgbasa ozi maka E90 E91 E92 1. anyị bụ ndị na - eduga n'ọgwụ njem nkeji elu Anyị nwere ndị ahịa na mba karịrị iri ise ma na-akwado ma na-enye ọtụtụ ụdị nke mba ụwa, yana ndị na-emepụta ụgbọ ala 10+. 2. Mechie ngwa ọrụ gị...
oem android ụgbọ ala ụgbọ ala maka E46 M3 1998-2004
Android 8.0 PX5 stereo ụgbọ ala android maka E46 M3 1998-2004 1. Nwee ahụmịhe DVD zuru oke site na nkasi obi nke ụgbọ ala nke gị. 2. Nkọwa dị elu na-enye mkpebi dị mma, na-ebuli ahụmịhe ụgbọ ala gị n'ime. 3. Igwe redio na-arụ ọrụ na RDS nyeere...
ụgbọ ala mgbasa ozi maka E39 E53 X5 1995-2002
Android 8.0 PX5 multimedia nkeji maka E39 E53 X5 1995-2002 1. Shenzhen Klyde Electronics Co., Ltd Co., Ltd nwere karịa 500 ụdị dị iche iche ma anyị na-ahapụ ngwaahịa ọhụrụ mgbe niile, ma nwee ezigbo mma na nkwụsi ike na ọrụ ndị ahịa zuru ụwa ọnụ....
Ihe ntụrụndụ ụgbọ ala gam akporo maka E46
Android 8.1 multimedia ụgbọ ala maka BMW E46 1 ) gam akporo 8.1, CPU: Rockchip PX30 Quad Core, RAM: 2GB 2 ) Na-akwado nsonaazụ ọdịyo subwoofer, ma na-ejikwa ya iche. Mkpebi ihuenyo: 1024 * 600 , Nkwado 1080P HD vidiyo, na-akwado ọrụ njikọ enyo, You...
Android ụgbọ ala DVD dvd maka M5
Android 8.1 multimedia ụgbọ ala maka BMW M5 1 ) gam akporo 8.1, CPU: Rockchip PX30 Quad Core, RAM: 2GB 2 ) Na-akwado nsonaazụ ọdịyo subwoofer, ma na-ejikwa ya iche. Mkpebi ihuenyo: 1024 * 600 , Nkwado 1080P HD vidiyo, na-akwado ọrụ njikọ enyo, You...
Egwuregwu Multimedia Player nke E46 1998-2005
Egwuregwu Multimedia Player nke E46 1998-2005 1, Naviggagharị 3D: Sitena ụgbọ ala nwere ọrụ igodo ọgbara ụwa zuru oke nke eziokwu zuru oke. Site na ọnọdụ dị ugbu a, ọsọ, ihe gafere, ngosipụta ala ụlọ, ngosipụta n'okporo ụzọ 3D, nchọta ebe ị...
E39 1995-2003 moto auto multimedia dvd player
E39 1995-2003 moto auto multimedia dvd player 1, Naviggagharị 3D: Sitena ụgbọ ala nwere ọrụ igodo ọgbara ụwa zuru oke nke eziokwu zuru oke. Site na ọnọdụ dị ugbu a, ọsọ, ihe dịpụrụ adịpụ, ihe ngosipụta ala ụlọ, ngosi 3D n'okporo ụzọ, nchọta ebe...
Octa Core 2GB Ram 16GB ROM E39 1, Naviggagharị 3D: Sitena ụgbọ ala nwere ọrụ igodo ọgbara ụwa zuru oke nke eziokwu zuru oke. Site na ọnọdụ dị ugbu a, ọsọ, ihe dịpụrụ adịpụ, ihe ngosipụta ala ụlọ, ngosipụta n'okporo ụzọ 3D, nchọta ebe ị ga-aga na...
China Bmw Android Car Dvd Player Ngwa
Igwe dvd ụgbọ ala a na-akwado igodo GPS, redio kachasị mma, ọrụ njikọ enyo, OBD, 3G WIFI, Bluetooth, DAB, MP3 video.
Usoro a nwere ike iwunye bmw ụgbọ ala dvd dị iche iche.
Usoro isiokwu a nwere DVD na ihuenyo mmetụ aka.
Usoro gam akporo android 6.0, bụ usoro ntụrụndụ ụgbọ ala : Site na njikwa ebe nchekwa kachasị mma na ike ihuenyo mmetụ nke android 6.0. Emeela ka usoro ihe eji arụ ọrụ rute ngwa ngwa na ọkwa zuru oke.